Xukuumada oo muujiyey iscasilaada Farmaajo inay ku xiran tahay Baarlamanka +Dhageyso – SBC
Xukuumada oo muujiyey iscasilaada Farmaajo inay ku xiran tahay Baarlamanka +Dhageyso
Posted by editor on Juun 11, 2011 Comments
Shir albaabadu u xirnaayeen oo golaha wasiirada DFKMG ay ku yeesheen magaalada Muqidsho ayay kaga hadleen arimo dhawr ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii lagu diley wasiirkii arimaha gudaha, iyo iscasilaada Ra’isalwasaaraha.
Hadaba warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra’isalwasaaraha qaybta warfaafinta ayaa lagu faahfaahiyey kulankaasi wixii looga hadley waxaana uu qornaa sidatan.
Ref: XRW/Tacsi 103/06/11 Date: 11 June 2011
Golaha Wasiirada waxey ka tiiraanyeysan yihiin geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Marxuum Cabdishakuur Sheekh Xasan Farax, Wasiirkii Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka oo ku geeryooday qarax argagaxiso oo ay soo qorsheeyeen kooxaha xagjirka
ee khawaarijta ah ee diiddan nabadda dalka. Golahu waxa ay tacsi u direen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday marxuumku.
Golaha Wasiirada waxay soo dhoweeyeen, rabitaankii shacabka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa oo ay ku muujiyeen dareenkooda iyo taageeradooda Ra’iisul Wasaare Maxamed Cabdullahi Maxamed iyo xukuumaddiisa. Taasoo ah markii ugu horreysey ee taariikhda Soomaaliya oo ay shacabka si hagar la’aan ah u muujiyeen dareenkooda iyo taageeradooda.(Link-kan ka dhageyso) Halkan ka dhageyso Afhayeenka xukuumada oo ka hadlaya shirkaasi